January 7, 2018 4:33 am Views: 143
Madaafiic ayaa lagu garaacay mid ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn uu leeyahay maamulka gaala raaca Puntland,iyadoona warar hor dhac ah laga helayo duqeyntaasi.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey tiro madaafiic ah ku garaaceen saldhiga maleeshiyaatka Ashahaado la dirirka (P I S) ee maamulka Puntland ay ka sameysteen Afafka hore ee deegaanka Galgala.
Jugta madaafiicda lagu garaacay saldhiga waxaa si aad ah looga maqlayay qeybo badan oo ka mid ah deegaanka Galgala iyo duleedka magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari.
Madaafiicda ayaa gudaha u galay saldhiga waxaa la wada arkayay Uura Madow iyo Holac ka baxaya saldhiga taasi oo muujineysa iney jirto khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed oo maleeshiyaatka Puntland lagu gaarsiiyay duqeyntaasi.
Duqeyntaan ayaa kusoo aadeysa xilli muddooyinkii dambe ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah maamlka gaala raaca Puntland oo ah maamul ay dhisatay dowlada Kufaarta Xabashida Itoobiya.